University of Exeter - Ezemfundo eGreat Britain, England
University of Exeter Yokuxhumana
isifinyezo : U E
Wasekelwa : 1922
Ungakhohlwa xoxa University of Exeter
Bhalisa at University of Exeter
The University of Exeter evezwe top UK 10 esikhathini esedlule 4 iminyaka (The Times and The Guide Sunday Times Good University) futhi lifaka phezulu 100 emayunivesithi emhlabeni ngokuvumelana TAma-IME wezeMfundo ePhakemerankings international. I CWTS Leiden rank 2015 kwenza nathi 34 emhlabeni for ukuhileleka ngokubambisana zesayensi kanye nomthelela. Singabantu ilungu ohlonishwa Russell Group yocwaningo amayunivesithi olunzulu.
Izinga lemfundo kanye nesipiliyoni wathola at University of Exeter kusho zibalwa 8 e-UK yakamuvaTimes Higher Education Student Experience Survey.
Ngokusho yakamuva WeMfundo Ephakeme Izibalo Agency Data, thina ezibekwe 9 out of wonke amanyuvesi UK ophumelele: 84 cent labafundi bethu ngamunye beqede noma Okokuqala noma 2:1.
Abafundi bethu benza umsebenzi ngenkani okuningi nathi futhi kubo - sihlose ukufundisa kwethu kube ugqozi nokufunda yakho ezehlukile.
okufundisa Research aphefumulelwe
Abasebenzi bethu bezemfundo bangaphezu kuka abafundisayo afundisa amabhuku. They ongalungisa okuholela ucwaningo ngendaba endaweni yakho. Amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili cent yocwaningo lwethu ngalinye ilinganiswe njengoba izwe phambili noma wonke amazwe omhlaba (Ucwaningo Excellence Framework 2014). Uzokwaziswa bafundiswe ngochwepheshe futhi ube yingxenye isiko lokuthi liphefumulelwe ucwaningo - nizoxoxa nokuzwa izindaba ezintsha kakhulu e izingqungquthela tutorials ungase ube ilunga eliqavile lalokhu okulandelayo iqembu labacwaningi.
At Exeter abafundi zifakwa at inhliziyo ohlelweni bese unikezwe amakhono kanye izakhiwo ukuzwakalisa imibono yabo nozifunayo. Amazinga aphezulu trust ekukhuliseni abafundi ukuba balolonge siqu isipiliyoni sabo eyunivesithi kanye nemiphumela kugcina kujwayeleka kakhulu.
Guild I Students 'kukhona lula futhi aqondise lo, futhi ubuhlobo emihle esinawo ne-University ivumela imibono for ushintsho ukuza ophawulekayo.
Lokhu isiko esiyingqayizivele ogxile kufezwa ngokusebenzisa umsebenzi owenziwa yethu esiyenza ngomphefumulo wonke. zesiFundo Reps kanye scheme Guqula Agents, kodwa zonke umfundi kuyakhuthazwa impendulo futhi bahlanganyele emphakathini ebazungezile. Lapha, everybody uyamenywa ukuba babe yingxenye yalesi emphakathini, futhi abafundi indlela kanye nabasebenzi beze ndawonye emibuthanweni like imiklomelo imfundiso, Ngokwesibonelo, tibalo lokhu. Njengoba ngiye bavotela izinkulungwane zabo abasebenzi bafuna ukugubha, abafundi basuke ke wacela abasebenzi at a fabulous Emcimbini, ebona abantu abavela kulo lonke elase campus futhi nakakhulu lubuthana ukuqaphela umsebenzi onzima.
Siphinde kubamba scheme shadowing, abafundi elandelayo zamalungu asekhulile abasebenzi usuku kanye nabasebenzi ongaphenduliwe lokhu by shadowing kwabo ukubuya. I wathatha ingxenye kulo nyaka odlule, ukuya emihlanganweni oyiSekela-Shansela for Education, UJanice Kay, ngubani-ke beza izinkulumo zami kanye nezinkulumo kamuva kulelo sonto. Akukho ukwehlukana lapha, sonke sisebenza ndawonye wonke umuntu uzizwa engeneka.
Students 'Guild Vice President Academic Affairs
I Business School
Imvelo kanye Sustainability Institute
Ukuphila Systems Institute
College of Engineering, Mathematics kanye neSayensi
Mining and Minerals Ubunginiyela
College of Social Sciences and Izifundo International
Izifundo Arab kanye Islamic
Sociology, Ifilosofi Anthropology
Iqhinga kanye Ezokuphepha Institute
Art Umlando Visual Namasiko
Classics futhi Umlando wasendulo
Ihlangano yokuNgeza Biomedical & Isayensi Clinical
Ukugubha emsebenzini wokufundisa yesayensi Prince Albert, futhi liphefumulelwe Isentha Olukhulu 1851, Exeter School of Art 1855 kanye Exeter School of Science e 1863 abangu eyasungulwa. Ngo 1868, Schools ka Ubuciko Nesayensi wathuthela Royal Albert Memorial Museum Queen Street, Exeter futhi, kanye nokusekelwa University of Cambridge, waba Exeter Technical University Extension College e 1893.
Ngo 1900 kusihloko salo olusemthethweni lashintshwa laba Royal Albert Memorial College kanye ekolishi kuhanjiswe ku Bradninch Indawo Gandy Street. I ekolishi kwaphinde uqambe kabusha kuya University College of South West of England e 1922 emva ekolishi sifakwa ngaphansi komthetho theCompanies futhi afakwe ohlwini izikhungo ukuthola imali kusuka ke University Izibonelelo leKomiti. Njengoba Kwakuyisiko izikhungo enyuvesi lensha eNgilandi ngo nesishiyagalolunye leminyaka nasekuqaleni wamashumi amabili, abafundi basekolishi enawulungiselelwa degrees sangaphandle University of London.
Alderman W H Reed, bangaphambili imeya Exeter, zanikela Streatham Hall Streatham bezindlu entsha University College 1922. Streatham Hall lethiwe Reed Hall emva umsizi walo. Ngesikhathi esifanayo, uthishanhloko lokuqala University College, kamuva Mnumzane Hector Hetherington, athonya oPhethe College ukuthenga ingxenye ezinkulu Streatham bezindlu. A hambisa kancane kuze Streatham bezindlu kusukela enkabeni yedolobha iphutha ngokuhamba kwesikhathi. Lesi sakhiwo esisha sokuqala esakhiwa ku-Streatham bezindlu laliwukuphela kwesakhiwo Washington Umculi; itshe isisekelo esabekwa inkosi yase-Wales (kamuva-King Edward VIII), uMongameli wase-University College of the South West of England. Lesi sakhiwo kwavulwa 1931. Eyokuqala amahholo injongo-eyakhelwe lokuhlala, Mardon Hall, wavula e 1933. Eyesibili isakhiwo zezemfundo ubuphansi abenguMesiya Roborough Library okuthiwa ngekuvuma isithakazelo ezithathwe ukuthuthukiswa kolishi wokuqala iNkosi Roborough, omunye bona babasekeli babo zalo zokuqala. Roborough Library yaqedwa emhlabeni 1939.
The University College of South West of England baba University of Exeter futhi wathola Royal Charter yayo 1955, ncamashi eyikhulu ngemva kokwakhiwa original Exeter School of Art. UQueen Elizabeth II waletha Charter eyunivesithi ekuvakasheni Streatham ngonyaka olandelayo.
Le nyuvesi kwavele inkathi ukunwetshwa eside ngawo-1960. Between 1963 futhi 1968, isikhathi lapho inani labafundi Exeter sikhiqize inani eliphindwe kabili, izakhiwo ezinkulu kungekho kweshumi zaphela ubuphansi Streatham kanye namahholo lokuhlala ngoba emhlabeni 1,000 abafundi. Lezi zindlu kuhlanganisiwe ukuze Chemistry kanye Physics neminyango, i-Newman, Sokugezela and Engineering Izakhiwo kanye Court Streatham. Isakhiwo Queen kwakuvulwe ngokuba Ubuciko Faculty e 1959 kanye Amory Isakhiwo, izindlu Law and Social Sciences, ilandelwe 1974. Eminyakeni ematjhumi amabili alandelayo, utshalomali eside senziwe ekuthuthukiseni entsha self-catering izindawo zokuhlala abafundi.
Izipho ezivela States Gulf kwenza ukuba ukwakha umtapo omusha eyunivesithi e 1983 futhi muva nje baye bavumela for kudalwa Institute entsha Arab kanye Islamic Studies. Esinye umnikelo ezinkulu inikwe amandla kwaqedwa Xfi Centre wezeziMali nokuThuthukiswa Investment. Kusukela 2009, abalulekile kokutshalwa kwezimali lwenziwe yokuhlala entsha umfundi, Izakhiwo ezintsha e-Business School, kanye Forum: ukuthuthukiswa entsha maphakathi Streatham Campus.
Ngo 1838, i-Exeter Diocesan weBhodi Yemfundo ukuxazululwa wathola isikhungo imfundo nokuqeqeshwa schoolmasters, isinyathelo sokuqala salolu hlobo England. Ngenxa yalokho, Esikhathini esingangonyaka kamuva, i-Exeter Diocesan Training College yadalwa Cathedral Vala, Exeter endlini wangaphambilini we Archdeacon ka Totnes, ezincikene Exeter Cathedral. Uthishanhloko wokuqala waqokwa kanye ekolishi wavula e 1840.
Ukunwetshwa ilandelwe, futhi 1853, John Hayward (owayengamele kamuva obhekene umklamo we-Royal Albert Memorial Museum) eyalwa ukuba ukuklama injongo izakhiwo eyakhelwe ekolishi ku Heavitree Road. Lesi sakhiwo, kakhulu elakhiwa ngo grey nge-limestone yangekhulu Torbaywith Bath Stone kusaladi, eyaqedwa ekwindla ka ngonyaka olandelayo. On 18 October 1854, ngemuva kwethu enkonzweni Exeter Cathedral, i emcimbini wokuvula i izakhiwo ezintsha owawuse. Kule usuku 1854 (Usuku St likaLuka), ekolishi ukuthi unofficially eyaziwa ngokuthi iSt likaLuka. engayitholi kolishi e 1854 was 40 abafundi.
Ngo okufanayo, eRoyal Albert Memorial College, i isinyathelo emnyangweni Ubuciko kanye Sciences 1912 ekugcineni zaholela ekwakhekeni kwe-Isikhungo semfundo (zazo College St likaLuka wayeyilungu ephambili) futhi umnyango ahlukene Extra mural Izifundo ngezinhloso ukuqeqeshwa uthisha. Exeter Diocesan Training College ebekwa uqambe kabusha St likaLuka College Exeter ngo 1930 futhi baba co-ezemfundo 1966.
Ngo 1978, St likaLuka College Exeter ezahlanganiswa University of Exeter. A ubuhlakani sidalwe zokuhlanganisa Institute senyuvesi wezeMfundo St likaLuka College Exeter ibe School entsha Ezemfundo.
Peninsula Medical School yasungulwa ngo 2000 ngokuhlangana ne-University of Plymouth ne-National Health Service, based e-St likaLuka kanye iRoyal Devon futhi Exeter Isibhedlela. The School of Dentistry wavula e 2007 futhi, kanye Peninsula Medical School, wadala Peninsula College of Medicine Dentistry. campus St kaLuka indawo esiyinhloko University of Exeter Medical School, okuyinto wamukela abafundi bayo kuqala 2013.
Phakathi namakhulu eminyaka angu nesishiyagalombili futhi nesishiyagalolunye, Cornwall wayephakathi eziphawuleka kakhulu metalliferous izimayini izifunda emhlabeni. Camborne School of Mines yasungulwa ngo 1888 ukuhlangabezana nezidingo zalesi umkhakha wendawo.
Camborne School of Mines yayisesigodini maphakathi Camborne ngoba ecishe ibe ikhulu kodwa, ezilandelayo utshalomali enkulu yi-international yimboni yetimayini futsi abanye, bathutha e 1975 ezikhungweni injongo-eyakhelwe maphakathi no-ndlela phakathi Camborne futhi Redruth. ukunwetshwa Obalulekile nokwahlukana kwezimboni ukufundisa nokucwaninga ilungiselelo owenzeka phakathi 1980 kanye 1990 ekuseni, kuhlanganise nokwenza undergraduate wafundisa izinhlelo degree postgraduate e nokwakheka, isayensi kwemvelo futhi wezokwakha. Ngo 1993, Camborne School of Mines ezahlanganiswa University of Exeter.
Imizamo yiNyuvesi Exeter nabanye ukuze sandise ilungiselelo lemfundo ephakeme e Cornwall kuholele Combined Amanyuvesi e Cornwall (Cuc) isinyathelo 1999. Njengengxenye yalolu hlelo, Penryn, ngaphandle nje Falmouth, baba indawo ye Penryn Campus, isikhungo wabelane nge Falmouth University. Camborne School of Mines wathuthela Penryn ngesikhathi 2004 lapho entsha Cornwall Campus nyuvesi wazivula.
Uyafuna xoxa University of Exeter ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Exeter kumephu
Izithombe: University of Exeter Facebook ezisemthethweni
University of Exeter Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Exeter.
Ngoba iNdlovukazi uMary I University of London London
WeNkosi College London London